» अब हेटौंडाको सडक २५ कि १६ मिटर ?
अब हेटौंडाको सडक २५ कि १६ मिटर ?
१ बैशाख २०७६, आईतवार १०:३०
मकवानपुर । मकवानपुरको हेटौंडाको सडक विस्तार भई २५ मिटर कायम हुनेमा धेरै आशावादी थिए । राप्तीरोड लगायत सडकको जग्गामा परेका संरचना भत्काउँदै सडक डिभिजन कार्यालयले सडक विस्तारको काम सुरु पनि गरेको थियो । केही सरकारी कार्यालयका संरचना भत्काउँदै सुरु भएको सडक विस्तारको कार्य अब नरोकिनेमा विकासप्रेमी विश्वस्त थिए । राप्तीरोडमा अब सडक फराकिलो भएर क्षति हुने भयो भन्दै केही व्यवसायी सरे भने केहीले डोजरले घर भत्काउँदा आफ्नो सम्पति बढी क्षति हुने भएकाले आफैंले भत्काउँदा घरको केही सम्पति जोगिएला भनेर आफैंले भत्काउन सुरु गरेका थिए ।
सडक फराकिलो पार्ने अभियानमा २५ मिटर भित्रका घरधनी तथा व्यवसायी बाहेक सबैको साथ सहयोग रहेको अवस्थामा सडक विस्तार गर्ने काम रोकियो । उद्योग वाणिज्य संघ, केही व्यवसायी, घरधनीले खुशीयाली मनाए । रोकिएको सडक विस्तार कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । बरु २५ मिटर विस्तार गर्नुपर्ने सडकलाई अब १६ मिटर विस्तार गर्ने र हेटौंडास्थित बाइपास सडकलाई मुख्य हाइवे कायम गर्ने चर्चा यतिबेला बजारमा छ । प्रदेश ३ सरकारले यो निर्णय नै गरेपछि चर्चा थप बढेको हो । यसका लागि केन्द्र सरकारसंग समन्वय गर्ने प्रदेश सरकारको भनाई छ । अहिले प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय चुनावताका राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले आफ्नो चुनावी एजेन्डा बनाएका थिए । थापाको चुनावी एजेन्डालाई प्रदेश सरकारले पनि निर्णय गरी साथ दियो भन्ने सर्वसाधारणलाई लागेको छ ।
प्रदेश सरकारले हेटौंडाको सडक २५ मिटर फराकिलो बनाउँदा मुख्य बजार क्षेत्र पूर्ण रुपमा सकिने भन्दै फागुन ७ गते ६ मिटर मात्र फराकिलो बनाउनको लागि केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । हेटौंडाको सडकलाई फराकिलो बनाउँदा हेटौंडा सकिन्छ भनेर विगत देखि नै अभिव्यक्ति दिदै आएका प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडल अहिले पनि आफ्नो विचारमा अडिग रहँदै सडक विस्तार कार्यलाई १६ मिटरमा कायम गर्ने भनेर निर्णय गरेपछि नागरिक थप सशङ्कित बनेका हुन् । हेटौंडाका नागरिक अब हेटौंडाको सडक विस्तार कार्य कसरी अघि बढ्ला भनेर चिन्तामा रहेका छन् । राष्ट्रिय राजमार्गबारेको निर्णय संघीय सरकारले गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले यो निर्णयबारे संघीय सरकारको निर्णय पर्खेर बसेको छ । तर राष्ट्रिय राजमार्गका विषयमा संघीय सरकारले पनि प्रदेश सरकारले भने बमोजिम निर्णय गर्छ भन्ने देखिदैन । सडक विस्तार कार्य अघि बढ्ने विषयमा विभिन्न व्यक्तिको विश्लेषण सुन्दा प्रदेश सरकार पनि सम्भव नहुने निर्णयमा अल्झेको बताउँछन् ।
मेयरको चाहाना २५ मिटर
हेटौंडाको सडक फराकिलो पार्नुपर्नेमा मेयर हरिबहादुर महतले जोड दिएका छन् । रेडियो बुलेटिने आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा महतले सरकारले हेटौंडाको सडक २५ मिटर बनाउँने काममा अलमल गरेको बताए । उनले सडक फराकिलो नपार्दा अनेक समस्या आएको भन्दै फराकिलो पार्नका लागि सरकारलाई आग्रह गरे । सडक फराकिलो पार्नका लागि संघीय सरकारलाई आग्रह गरेपनि सरकारको ध्यान नगएको उनले गुनासो गरे ।
हेटौंडाको सडकलाई २५ मिटरमा विस्तार नगर्दा ट्राफीक समस्या आएको समेत बताए । नागरिकहरुले हेटौँडभित्र हुने सबै समस्यालाई नगरले समधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने बताउँदै ट्राफिक समस्या समधान गर्ने काम मेयरको नभएको उनले बताए । हेटौंडाको विकासका लागि सडक फराकिलो पार्नुपर्ने मेयर महतको भनाई छ ।